फाल्गुनन्द गोल्डकपमा दर्शकहरुको चाप कुन दिन कति ? – Khel Dainik
फाल्गुनन्द गोल्डकपमा दर्शकहरुको चाप कुन दिन कति ?
रमेश समदर्शी राई
पाँचथर (खेलदैनिक) । फिदिममा जारी रुस्लान १०औँ फाल्गुनन्द गोल्डकपको सेमिफाइलनका खेल सकिँदासम्म कुन दिन कति दर्शकले टिकट काटेर प्रवेश गरे होलान ?
यस पटकको संस्करणमा आयोजकले अपेक्षा गरेभन्दा बढी दर्शक उद्घाटन खेलमा आएका थिए । झापा ११ र ताप्लेजुङबीचको खेलमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक दर्शक आएर हौसला मिलेको फिदिम स्पोर्टिङ क्लबका अध्यक्ष विमल श्रेष्ठले बताए । उद्घाटन खेलमा एक सय दरका टिकट राखिएको थियो । जसमा टिकट बिक्रीबाट मात्र एक लाख ५२ हजार २ सय संकलन भएका क्लबका महासचिव पासाङ तामाङले जानकारी दिए ।
महासचिव पासाङ अनुसार दोस्रो खेलमा आयोजकसँग मोरङ–११ को खेल थियो । तर, अपेक्षित टिकट बिक्री भने भएन । विदेशी खेलाडीलाई आयोजकले खेलाएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला टिकट बिक्री भने ९० हजार ४ सयको मात्र भएको थियो । तेस्रो खेलमा आयोजकले टिकट दर १५० तोकेको थियो । झापा ११ र एपीएफबीच भएको खेलमा फेरि एक लाख १४ हजार ७ सय टिकटबाट संकलन भएको थियो ।
आयोजक फिदिम स्पोर्टिङले आर्मीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा फेरि टिकट बिक्रीमा कमी आउनपुग्यो । दर्शकले आयोजकलाई साथ दिएनन् । यस खेलबाट ८३ हजारमात्र टिकट बिक्रीबाट संकलन भएको आयोजकले जनाएको छ ।
सुनसरी र सरस्वती युथ क्लबबीच भएको पाँचौ खेलमा एक लाख २ हजार ५ सय, छैटौ खेलमा रोयल एफसी दार्जीलिङ र ब्वाइज युनियन काठमाडौँले खेलेमा थिए । त्यो खेलमा टिकट बिक्रीबाट ९७ हजार २ सय रुपैयाँमात्र संकलन भएको आयोजकले जानकारी दियो ।
त्यस्तै, दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा आर्मी र रोयल एफसीले भिडेका थिए । जसमा एक लाख ७५ हजार ७ सय टिकटबाट संकलन भएको थियो ।
अहिलेसम्म आठ खेल सम्पन्न हुँदा आयोजकले टिकट बिक्रीबाट जम्मा १० लाख २ हजार ३ सय रुपैयाँ संकलन गरेको छ । सोमबार फेरि झापा ११ र आर्मीबीच फाइनल खेल हुँदैछ । फाइनलमा भने दर्शकले आयोजक नभए पनि टिकट काटेर झापा ११ को समर्थनमा मैदान प्रवेश गर्ने अनुमान छ । यसअघिका खेलका आधारमा आयोजकले पनि यस्तै अपेक्षा गरेको छ ।
← फाल्गुनन्द गोल्डकप : आर्मी र झापाबीचको फाइनल भिडन्त आज इटहरी गोल्डकप माघ १२ देखि, विजेतालाई १६ लाख →